How To.. » ဂေဇတ်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်-A Guide to Using Gazette	110
http://mandalaygazette.com/ ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ညာဘက် ဘားမှာ In & Out အောက်မှာ Log In ရှိ ပါတယ်
မိမိအကောင့်ရဲ့ Dashboard – http://mandalaygazette.com/wp-admin/ သို့ ဝင်တာနဲ့ လဲ အတူတူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလင့်ခ့် http://mandalaygazette.com/wp-admin/post-new.php ကိုနှိပ်၍လဲ တိုက်ရိုက် တင်နိုင်ပါတယ်။
amatmin says: ပို့စ်အသစ်တင်ချင်တဲ့ ဆရာသမားတွေ..
ဟုမ်းပေ့ခ်ျပေါ်ကHow To WriteaPost ဆိုတာဂျီးတော့မြင်ကြမှာပါ နော.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) says: အတော်ပဲ ဒါလေး ကော်ပီကူးပြီ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 54
pu ma says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လောလောဆယ်တော့နဲနဲရွာလည်လိုက်အုံးမယ်
pu ma says: လောလောဆယ်တော့မဖျက်နဲ့အုံးနော်တို့ကနဲနဲပိန်းတယ်
alinsett says: ရွာသူ ရွာသားအသစ်တွေ အတွက် သိပ် ကို အဆင်ပြေစေမျာပါ ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပေါက်ကျော်မ
water-melon says: မစိန်ပေါက်ရေ
April Star says: Points tway ka bar lope ya mhar lal?
Ko Hla Myo Swe says: ကျေးဇူးပါပဲ ကို kai ရေ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 642
ညလေး အိတုံ says: ကျေးဇူးပါကိုကြီး………ညလေး ……..လက်တည်.စမ်းလိုက်ဦးမယ်နော်….
ညလေး အိတုံ says: အောင်မြင်သွားပီ…..ကိုဂီ၇ယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်……
ညလေး အိတုံ says: မှားလို.ကိုကြီးပြောတာ………..နော်
snow white says: အရမ်းအရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် တယောက်ထဲ လိုက်လုပ်ကြည့်နေပေမယ့်ပို့စ်ကမတက်လာပါဘူး ဒီစာလေးဖတ်လိုက်လိုက်လုပ်တာအဆင်ပြေလို့ ပို့စ်တခုတင်လိုက်နိုင်ပါတယ် တကယ်ကိုကျေးဇူးပါ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ် သေချာအသေချာလေးရေးပေးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ညလေး says: ဦးဗိုက်…….ပိုစ့်အသစ်တင်မလို.လုပ်နေတာ စာ၇ိုက်တာဘယ်လိုမှမ၇၀ူးဖြစ်နေတယ်……
ဗိုက်ကလေး says: အူးလေးရ
ညလေး says: အဟဲ……….မောနေ၇င်လက်ထဲကဘီအီးလေး….
ညလေး says: အိုကေသွားပါပြီ.အူးဗိုက်၇ယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဂျောင်း
ီဗိုက်ပူသူတော် says: ကျေးဇူးပါ ဗိုက်(နမည်တူတော.ခေါ်၇တာကောင်းဘူး)
ဗိုက်ကလေး says: အူးလေးက ဗိုက်ပူ
ko win says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ တကယ်ပါ။ ကျွန်တော်က သည်မှာ ဘာဆိုဘာမှမသိတော့ သူကြီးလှမ်းမေးမလို့လုပ်နေတာ။ ခုတော့ ဦးစိန်ဗိုက်ကောင်းမှုကြောင့် သိချင်တာတွေ သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူး ကဍေကဍာပါခင်ဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 304
Nyein Nyein says: ဦးဗိုက်ရေ………..
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား..
Nyein Nyein says: ဦးဗိုက်ရေ…… ကယ်ပါဦး။ သမီး ပို့စ်အသစ်တစ်ခုရေးတာ category မရွေးလိုက်မိဘူး။ အဲဒါ copy/paste ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလေးပါ။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်။ ကူညီပါဦး။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9
Thek Ka says: တင်ပြီးသားပို့စ်ကို edit လုပ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ပြောပြပေးပါနော်။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ၀င်ကာစရွာသား အတော်များများ ပြင်ခွင့်မရှိသေးပါဘူးဗျား..
Thekka says: ဟုတ် ဒါဆို တော်တော်ကြာမှ ပြန်လာမေးပါ့မယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1112
P chogyi says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
foe zaw says: တော်တော်တော့အဆင်ပြေပါတယ်သူတော်ရေ ဒီလိုတင်ပေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါပဲနော် တင်မယ် ဖတ်မယ် မှတ်မယ် မျှဝေမယ်ဟေ့…………………………
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 39
ချစ်တိုးလေး says: ဦးဗိုက်ရေ သေသေချာချာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ တင်ပေးထာလို့ ကျေးဇူးအများကြိံးတင်ပါတယ်နော် တိုးလေးက ရွာထဲရောက်ခါစဆိုတော့ ဘာမှမလုပ်တတ်ဖြစ်နေတာဒိံပိုစ့်လေး ဖတ်ပြိံးမှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ဒါပေမယ့် ပုံတွေ အများကြိံးတင်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲပြောပြပေး ပါဦးနော် ???
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 246
eipu says: ကော်ပီယူထားလိုက်ပါတယ်…
Shwe Ei says: ကလောင် နာမည်နဲ့ search လုပ်ရင်ရော မရဘူးလား ဆြာဗိုက်ရယ်။ ဂယ်မသိလို့ပါ။
Kyaw Myo Thet says: ကျနော် ဒီစာရွက်ကိုလိုက်ရှာနေတာ သုံးလလောက်ရှိနေပြီဒီနေ့မှပဲတွေ့ရတော့တယ်ဗျာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 84
athwe lay says: လက်စနဲ့ကိုဗိုက်ရေ TAG ဆိုတာလေးရှင်းပြပြီးထည့်နည်းလေးပါနမူနာပြပေးပါနော်။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ပို့ စ်တင်တဲ့အခါ Category တွေရဲ့အောက် Post tag ဆိုပြီး စာရေးတဲ့ အကွက်လေး ရှိတယ်
athwe lay says: ကျေးဇူးပါဗိုက်ရေ အဆင်ပြေသွားပါပြီခင်ဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 15
nay khin says: ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ရေးသားဖော်ပြထားလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 354
သူကလေး says: :byae:
သီဟသူရ ညောင်ရမ်းဂျီးထူ says: ကျေးဇူး ဆရာသမား
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 211
myat pearl phyu says:့ all rite! thanks. i try it. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5
Thein Kyaw Soe says: ​ကျေးဇူးပါ ဆိုဒ်​လမ်းညွှန်​တင်​​ပေးထားတဲ့အတွက်​
Swal Taw Ywet says: အခုမှ ပြန်ဖတ်ဖြစ်တာ။